जो पहिला पाईलट थिए आज फूड डेलिभर बने,कोरोनाले यो अवस्थामा ल्याईदियो ! - Aajako Nepali Khabar
Home कोरोना अपडेट जो पहिला पाईलट थिए आज फूड डेलिभर बने,कोरोनाले यो अवस्थामा ल्याईदियो !
कोरोना अपडेट admin November 28, 20200Comment
एजेन्सी जो पहिला पाईलट थिए। विश्वव्यापि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले मानिसको जीवनमा नराम्रो प्रभाव पारिदिएको छ । कोरोनाकै कारण विश्वका मानिसहरुको रोजीरोटी गुमेको छ । खाना नपाएकै भरमा सजिलै मानिसको मरन हुँदैन । बाँच्नकोलागी उस्ले जस्तो सुकै संघर्ष गर्न परिरहेको हुन्छ । परिस्थिति अनुसार उस्ले आफुलाई बदलि रहेको हुन्छ । जस्ले परिस्थिति अुनसार जीउन जान्दछ त्यसले मात्रै जीवन जीउन सक्दछ ।